Voka-dalao 21 Nov 2018 - Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets - ewa.mg
Basket - Sport - Voka-dalao 21 Nov 2018 – Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets
T. Gibson 19 3/3 0/0 1/1 0 4 4 1 2 0 0 0 7 12
R. Covington 37 6/12 4/9 0/1 0 4 4 0 1 2 1 0 16 14
A. Wiggins 30 6/15 1/5 0/0 1 4 5 2 3 0 3 0 13 8
K. Towns 28 7/14 1/5 7/9 1 6 7 2 4 0 6 0 22 16
J. Teague 29 2/5 0/1 3/4 0 2 2 8 2 2 3 0 7 12
D. Saric 28 4/9 1/4 3/3 3 4 7 3 1 1 0 0 12 18
A. Tolliver 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Dieng 20 0/4 0/0 0/0 1 6 7 4 2 1 2 3 0 9
T. Jones 19 1/6 0/2 2/2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 -1
D. Rose 29 6/11 2/6 6/6 2 2 4 4 0 1 1 0 20 23
Total 35/79 9/32 22/26 8 32 40 24 15 8 17 3 101
P. Millsap 28 11/13 2/2 1/2 1 4 5 0 4 5 1 1 25 32
J. Hernangomez 32 3/11 2/7 0/0 3 3 6 2 0 0 2 0 8 6
N. Jokic 37 3/13 1/5 0/0 2 10 12 10 4 1 3 0 7 17
J. Murray 39 6/15 4/8 2/2 1 2 3 4 4 1 2 2 18 17
G. Harris 36 7/16 1/8 2/2 1 3 4 2 2 2 1 0 17 15
T. Lyles 14 2/7 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 4 -2
M. Plumlee 18 2/3 0/0 0/0 1 3 4 7 3 3 1 1 4 17
M. Morris 23 4/6 1/1 0/0 0 3 3 4 1 0 1 0 9 13
M. Beasley 14 4/5 3/3 0/0 0 2 2 0 3 0 0 0 11 12
Total 42/89 14/35 5/6 9 31 40 29 22 12 13 4 103
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves - Nba
Araka ny hita tao amin’ny tambajotra sosialy nivoaka, omaly talata, hisy mpilalao vaovao indray handrafitra ny Barea de Madagascar, amin’ny fiatrehana ireo lalao iraisam-pirenena, amin’ity taona 2020 ity. Fantatra ary izao fa nanaiky ny hanao mpilalao ny Barea i Sylvio Ouasserio. Mpilalao feno afaka milalao amin’ny toerana rehetra eny ambony kianja ny tovolahy, saingy ny vodilaharana havanana no hisy azy, ao amin’ny Barea de Madagascar. 25 taona izy ankehitriny ary mirefy 1,74 m, milanja 73 kg. Mpilalaon’ny CS Fola Esch, sokajy D1, Luxembourg.Raha tsiahivina, efa nilalao tao amin’ny AJ Auxerre, Frantsa, izy ary nandalo tao amin’ny Standard de Liège, Belzika, ihany koa. Efa nandrafitra ny ekipam-pirenena frantsay, sokajy U17, U18 ary U20.Nambaran’i Nicolas Dupuis, mpanazatra, fa nitady olona hapetraka eo amin’ny fiarovantena havanana izy izao tojo an’i Sylvio Ouasserio izao. “Mila hamafisina ny vodilaharana havanana sy izay mety ho mpilalao mpisolo an’i Metanire ka hahatsara rafitra ny Barea”, hoy i Nicolas Dupuis.Miandry ny fanamboarana ny pasipaoro maha Malagasy azy izany sisa ity mpilalao vaovao ao amin’ny Barea de Madagascar ity. TompondakaL’article Kitra: hanatevina ny Barea i Sylvio Ouasserio a été récupéré chez Newsmada.
Carmelo- Rockets, Tapitra
Efa tapitra sahady i Carmelo Anthony ao amin’ny Rockets! Niseho tamin’ny alahady, marina ihany kay ilay tsaho : hiala ao amin’ny Rockets i Carmelo Anthony rehefa afaka ora vitsivitsy. Raha arak’i ESPN, dia ho avoakan’ny Club amin’ny fomba ôfisialy izany fanambarana izany alohan’ny match amin’ny Warriors, hamarana ny fiaraha-miasa izay herinandro vitsivitsy monja… Efa tsy nandray anjara tamin’ireo lalao vitsivitsy taloan’io izy izay satria « narary » hono hoy ireo mpitondra, hijanona amin’ny Club i Melo mandra-pahahitany ekipa hafa. Raha mahita ekipa izy dia izay izany no ho ekipa 5 tao anatin’ny 14 volana satria nandalo tao amin’ny Knicks dia Thunder tamin’ny septambra 2017, avy eo nafindra tany amin’ny Hawks tamin’ny volana Jolay, dia nandeha tany amin’ny Rockets. Any Texas, dia nanampy ny akamany Chris Paul izy saingy tsy nety ny fiarahana. I Melo dia mpilalao matanjaka à mi-distance kanefa tsy dia manao defense, ary tsy mifanaraka amin’ny fomba filalaon’ny Rockets izany, izay nanapitra ny saison farany teo tamin’y laharana voalohany noho ny defense goavana ataony sy fomba filalao miodina amin’ny 3 points. Hatreto aloha, ts’isy vaovao mivoaka amin’ireo ekipa mety ho liana aminy. Maro no tsy maintsy handroaka mpilalao raha te haka azy, ary raha ny zavatra nasehony aloha dia tsy hifanesika ireo ekipa ireo.
Premier league – Voka-dalao 9 Decembre 2018 – Chelsea v. Man City